/Blog/Gallery/Ny fihenan'ny rongony 2,4-Dinitrophenol (DNP) dia tombony amin'ny fitomboan'ny taova
Posted on 03 / 12 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Ny ankabeazan'ny bodybuilders mpanohitra dia mandeha milevina hafa hitadiavana zava-mahadomelina hanatsara ny fahatsapan'ny vatany. Ny iray amin'ireo zava-mahadomelina matanjaka indrindra ampiasain'ny weightlifters dia antsoina hoe DNP. Ireo lehibebe dia manondro an'io zava-mahadomelina io ho toy ny jiro mahery indrindra eto an-tany. Izany dia satria manome vokatra mahagaga mahatalanjona amin'ny fofona matavy. Ny sasany amin'ireo zavatra tena manan-danja tokony ho fantatra momba ity vokatra ity dia ahafantarana ny vokatra entin'ny vokatra, ny fomba fiasany, ny tombontsoa, ​​ny valiny, ny antsasak'izay, ny vokany, ny dosage ary ny toerana hividianana izany, araka ny hazavaina ato amin'ity lahatsoratra ity .
Inona ny 2,4-Dinitrophenol (DNP)?
Ny 2,4-Dinitrophenol (DNP) dia iray amin'ireo zava-mahadomelina izay nahasarika ny sain'ny maro tamin'ireo vondrom-bahoakam-borona, fitafy ary ny vahoaka ho an'ny mahagaga levitra vokatry. Ity vokatra ity dia vondrona organika izay afaka manova ny dingan'ny fifandraisana amin'ny sela ao amin'ny vatana. Tany am-boalohany, ny vokatra dia nampiasaina ho karazana sehatra indostrialy, anisan'izany ny fampiasana azy ho toy ny mpandrindra ny sary, pestizidana, loko sy ny fitehirizana hazo.
Ny fahitana ny lanjany mahavoan'ny DNP dia natao tamin'ny taona 1933 avy amin'i Maurice Tainter, mpikaroka avy ao amin'ny Stanford University. Amin'ity vanim-potoana ity dia maro ny olona nampiasa ny rongony ho fanampiana vonjy taitra. Mety ho very ny vidin'ny 3.3 ao anatin'ny herinandro iray ny olona raha tsy mila manaraka ny fetran'ny sakafo. Izany no nahatonga ny zava-mahadomelina ho iray amin'ireo fitsaboana ho an'ny fiterahana, izay nampiasaina mba hitondra marary marobe.
Na dia izany aza dia hita ihany koa fa ny vokatra dia mifandraika amin'ny voka-dratsy hafa ary ny dokotera dia nampitandrina ireo mpampiasa ireo vokatra ireo. Ireo vokatra ireo dia mifanakaiky amin'ny olona tsirairay. Ohatra, ny olona sasany dia manaiky ny doka fanoratana raha ny hafa dia mety hisy fiatraikany na dia kely aza. Tao anatin'ireo tranga faratampony, nisy nitatitra ny fahafatesan'ireo dinitrophenol. Vokatr'izany dia voarara ny fitsaboana ao amin'ny US Food and Drug Administration (FDA) ao amin'ny 1938. Ny zava-mahadomelina dia novokarina ho toy ny zava-mahadomelina ambanin'ny tany mandrapahatongan'ny 1980 rehefa niverina tao an-tsena ho fanafody very. Nandritra io vanim-potoana io, dia navadika maimaim-poana ny aterineto ary nomena anarana hoe 'king of drug levitra'. Na dia izany aza, ny famoahana an-tserasera dia niteraka fahabangana misimisy sy tsy fahampian'ny torolàlana manokana avy amin'ireo manam-pahaizana.
2,4-Dinitrophenol (DNP) Ny voly dia manana molekiolan'ny molekiola C6H4N2O5 ary lanjan'ny molekiolan'ny 184.107g / mol. Fantatra koa ny anarana hafa ahitana Dinitrophenol Dimitrios, Dinitrenal, Nitromet ary Alpha. Ny fanafody dia mifangaro amin'ny endrika roa, 2,4-Dinitrophenol ary ny dinitrophenolate sodium. Ny poeta 2,4-Dinitrophenol (DNP) dia misy loko mavo.
Ahoana no anampian'ny 2,4-Dinitrophenol (DNP) amin'ny fahavoazana mavesatra?
Raha mieritreritra ny vokatry ny lanjan'ny lozisialy vokatry ny DNP ianao, iray amin'ireo fanontaniana mety hapetraky ny olona, ​​ahoana no mahatonga ny DNP hiteraka fahavoazana? Ity misy fanazavana momba ny dingan'ny hetsika DNP izay miteraka lanjany rehefa maka 2,4-dinitrophenol (DNP):
Ao anatin'ny tranga ara-dalàna, ny sela dia mihinana glucose amin'ny fisian'ny oksizenina. Izany dia mitranga ao anatin'ny mitochondria amin'ny sela ao amin'ny sela iray amin'ny dingana antsoina hoe cycles Krebs. Vokatr'izany dingana izany dia mihanaka ny protons mba hikirakiran'ny mitochondria amin'ny fonosana anaty amin'ny Mitochondria izay mamorona kisary mozika. Ity dia ny dian-tongotra avy eo dia mihamaivana rehefa mivezivezy any amin'ny fonosana ao amin'ny mitochondria ireo protons ireo.
Ireo proton ireo dia tsy maintsy miditra amin'ny alalan'ny adenosine triphosphate (ATP) synthase enzyme. Ny fandehanana ny protons amin'ny alalan'ity anzima ity dia mitarika amin'ny famoronana ATP, izay loharanon'ny angovo ho an'ny sela. Izany dingana izany, noho izany, dia manome fiantohana maharitra ny hery ao amin'ny sela.
Rehefa ampidirina ny Dinitrophenol, dia manakana ny lamosin'ny rivotra ho ao anaty fononteny mitochondrialina. Izany dia mitarika ho amin'ny fihenanam-pihetseham-pandrenesana miavaka eo amin'ireo fononan'ny mitochondria. Io fifantohana io dia mihoatra ny fifantohana amin'ny matroka mitochondria, izay mitarika amin'ny ady amin'ny fihetsika ambaran'ny ATP synthase. Vokatr'izany, ny angovo dia tsy ampiasaina amin'ny famokarana ATP na ny fitehirizana ao amin'ny vatana. Ity hery ity dia alefa toy ny fandaniana amin'ny hafanana.
Ho fanararaotana ny tsy fahampian'ny ATP vokatry ny DNP, ny vatana dia voatery handoro ny kôbhydrate, proteinina ary ny matavy. Izany dia mampitombo ny tahan'ny fatotra, proteinina ary carbia voadio ao amin'ny vatana. Izany dia mitarika fatiantoka haingana sy lany.
Izany koa dia mitarika amin'ny fanovana ny tahan'ny metabolism rate, mampitombo izany amin'ny taha ambony. Miaraka amin'ny fihenan'ny metabolismy, ny vatana dia mandoro haingana ireo fatim-bary sy kômôhy.
DNP dia mampihena ny fahaizan'ny metabolika ihany koa. Izany dia atao amin'ny fampitomboana ny famokarana ny hafanana ao amin'ny sela ao amin'ny vatana, dingana iray fantatra amin'ny hoe fanakambana. Vokatr'izany, ny vatana dia manapaka betsaka kokoa ny sira sy ny tsiranoka noho ny mahazatra. Izany dia mety miteraka mihoatra ny 50 isan-jato ny tahan'ny metabolista. Ireo olona eo ambanin'ny dosage DNP dia hahatsapa fatiantoka be dia be. Ny olona dia tsy mila manana fifehezana ny sakafo amin'ny fampiasana DNP noho ny fahaverezan'ny fahavoazana.
2,4-Dinitrophenol(DNP) tombontsoa amin'ny fanorenan-trano
Ireo mpandoro biriky koa dia nampiasa ny DNP ho fanampiana azy ireo bodybuilding fampiofanana. Ny antony voalohany mahatonga ny fikambanana bodybuilding DNP dia manampy amin'ny fahaverezan'ny fatin-danja sy ny lanjany. Manana tombontsoa maro ny DNP izay mandray anjara amin'ny lozam-pamokarana amin'ny vatan'ny olona. Ireto ny sasany amin'ireo tombontsoa ireo.
Ny DNP dia mandrisika ny fandroahana ny phosphorylation oksidy izay mampitombo ny tahan'ny metabolisma.
Izany dia mitarika ny habetsahan'ny ATP voavokatra ao anaty sela satria rehefa voan'ny DNP, dia mamokatra ambaratonga ambany ny ATP raha oharina amin'ny famokarana mahazatra. Mba hahazoana ny angom-pahefana ilaina amin'ny fitomboan'ny metabolisma, ny vatana dia voatery mamoaka ATP bebe kokoa.
Ny DNP dia manampy amin'ny fampitomboana ny famokarana hafanana amin'ny vatana.
Ho an'ny vatana izay mahatonga ny ATP tsy ampy, dia misy ny fanovana ny "electrochemical gradient" amin'ny proton. Midika izany fa ny angovo azo ampiasaina amin'ny fampidirana ATP dia afindra ho hafanana. Rehefa mamokatra hafanana tafahoatra ny vatana, betsaka ny kaloria dia levona ka miteraka lanjany.
Ny fahaverezan'ny DNP koa dia atahorana amin'ny fitomboan'ny sela amin'ny glucose (glycolysis).
Rehefa mifamatotra ny dingan'ny fanongonam-bidy sy ny fitomboan'ny glycolysis, dia very maina ny karbôgre. Ireo dingana ireo dia miteraka fahombiazana amin'ny famokarana angovo, izay mitarika ho amin'ny fahaverezan'ny lanjany.
Ny DNP dia azo ampiasaina mba hanomezana fanafody ho an'ny aretina sasany momba ny neurolojia mifandraika amin'ny fahanterana.
Na dia mbola tsy nampiharina tamin'ny olombelona aza izany, ny fikarohana dia naneho fa ny DNP dia mety ho singa manan-danja ho an'ity tanjona ity. Ohatra, ny fikarohana dia naneho fa azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny olona izay vao avy nokapohina fotsiny ilay izy. Izany dia satria afaka manohitra ny fahasimbana vokatry ny famelezana. Ny zava-mahadomelina koa dia manana fahafahana hanohitra ny adin-tsarobidin'ny oksidia amin'ny marary mijaly amin'ny aretin'i Huntington. Izany dia omena amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fiasan'ny DNP.
Ny steroid DNP dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana koa amin'ny fitsaboana ny mararin'ny Parkinson.
Tahaka ny andraikitry ny aretin'i Huntington, ny DNP dia manampy amin'ny fampivoarana ny asan'ny fiara ary hampihenana ny vintana amin'ny fahavoazana. Ireo asa ireo kosa dia tsy nampiharina tamin'ny olombelona noho ny filana fikarohana fanampiny.
Ny olona ambany sakafo dia mety hampiasa ny DNP fanampiny ho fanampiana ny fandaharam-potoanany.
Izany dia satria tsy mitaky fitsipika amin'ny fomba fihinanao izany. Afaka mihinana betsaka ianao ary manatratra ny tanjonao amin'ny fahavoazana. Mety hampihetsi-po koa io zava-mahadomelina io fanavakavahana.
Ny DNP dia azo ampiharina ara-pahasalamana koa amin'ny fitsaboana aretina.
Mety hiteraka aretina mampidi-doza toy ny homamiadana izany. Ny fikarohana kosa dia naneho ny fahaiza-manaon'ny DNP hiadiana amin'ny aretina.
Ny DNP dia manana ny fahafahana mitondra ny marary mijaly amin'ny diabeta.
Ny diabeta dia manatsara ny fanoherana ny insuline. Noho ny fanoherana ny insuline, ny fanehoan-kevitra ara-dalàna ny sela mankany amin'ny hormone mifehy ny siramamy dia novaina. Izany dia miteraka fanandramana amin'ny siramamy ao anaty sela. Ny DNP dia afaka manatsara ny fahatsapana ho an'ny insuline ao anaty sela. Manampy amin'ny fampihenana ny vintana amin'ny fivoaran'ny diabeta izany.
Ny DNP dia fanafody lehibe ho an'ny olona mikasa handatsaka ny vatana ao anatin'ny fotoana fohy.
Ity dia mety ho vahaolana tanteraka ho an'ny olona iray, izay, ohatra, mitady endrika tsara ho an'ny fampisehoana. Satria noho ny vatanao eo ambany DNP, dia voatery hampiasa ny tavy voankazo hamokatra angovo izy mba handrakofana ny tsy fahampian'ny angovo noforonin'ny DNP. Ankoatra izany, tsy ny ankamaroan'ny sakafo horaisinao no ampiasaina amin'ny fitehirizana ny tavy. Noho izany, dia miha-matavy kokoa ianao rehefa mitaky angovo mihoatra ny mahazatra ny vatanao. Bilaogera maro no nitatitra ny fahombiazan'ny fijoroana vavolombelona taorian'ny fampiasana ny DNP fat burner.
Noho ny Dinitrophenol sy ny fahaverezan'ny fatotra, dia azo ampiasaina ny mitondra ny olona manana toe-piainana tafahoatra.
Ny tombony amin'izany dia ny tsy manimba ny taova hafa na ny asany raha ampiasaina araka ny tokony ho izy. Ny tahan'ny metabolika mitombo dia mahatonga ny fihinanana kalôria lehibe ka miteraka lanjany. Mitovy amin'ny fomba fanaon'ny mpampihorohoro koa izany.
2,4-Dinitrophenol taloha sy aoriana
Ny DNP dia azo raisina ho toy ny iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra ampiasaina amin'ny fatiantoka mavesatra sy ny fambolena. Izany anefa dia mitaky ireo mpampiasa hampahafantarina sy hanam-potoana tsara mba hampihenana ny vintana amin'ny loza ateraky ny vokatry ny DNP. Ny bodybuilding DNP sy ny DNP dia mety hitranga mandritra ny fotoana fohy dia tranga toy izany amin'ny mpampiasa maro. Ohatra, ny sasany tamin'ireo mpampiasa dia nitatitra fa nafoiny tamin'ny 6kgs tao anatin'ny folo andro raha tsy misy sakafo na fanairana manokana. Izany dia niaraka tamin'ny fahaverezan'ny 20% ny fatin'ny vatana.
Raha mitady ny DNP aloha sy aorian'ny valiny, dia zava-dehibe ny manamarika fa tsy toy izany ny fomba rehetra ho an'ny olona rehetra. Ho an'ny olona sasany, ny vokatra dia hanampy amin'ny alalan'ny dosage mahazatra raha toa ka mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny olon-kafa izany na dia amin'ny dipoavatra ambany indrindra amin'ny DNP aza.
Miaraka amin'ny dosage mety DNP, dia mety ho tena mahavariana ianao DNP zava-mahadomelina taloha sy taorian'ny valiny. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny bodybuilders dia very eo anelanelan'ny 5 sy 15pounds. Ny tombony dia ny fahaverezan'ny DNP tsy miaraka amin'ny fanamarihana ratsy avy amin'ireo taova hafa. Na dia misy aza ny fihazonana rano, dia tapaka ny rano rehefa ajanona ny doka. Vokatr'izany, ny fahaverezan'ny lozam-pifamoivoizana nandritra ny dingan'ny DNP dia mety ho voasakan'ny fitehirizana ny rano, ka sarotra ny manombatombana ny fatiantoka mavesatra raha mbola ao anatin'ny tsingerina. Mandritra ny fotoan'ny DNP DNP, dia mihena ny rano voatazona ary afaka manisa ny lanjany very nandritra ny dio steroid. Na dia ao anatin'ny tsingerina aza dia zava-dehibe ny mitazona rano satria ny vokatra miteraka hafanana dia manome anao fahatsapana mangetaheta sy hatsembohana. Ny olona sasany dia tia ny mandeha tsingerina mandritra ny fialantsasatra sy volana ririnina, satria mety hahakivy sy tsy ho afa-po ny fahatsapana.
Ny DNP dia miteraka ny fangatahana bebe kokoa amin'ny glucose amin'ny vatany amin'ny alàlan'ny fanodikodinana ny ATP, izay manery ny vatana hanaja ny fitaterana glucose. Izany dia mitana andraikitra manan-danja amin'ny lozan'ny fatiantoka.
Ny olona sasany dia manakana ny DNP amin'ny insuline mba hanatsarana ny DNP. Mihabetsaka ny fiasan'ny insuline amin'ny fananganana glucose mamorona tontolo anabolika ho an'ny fahaverezan'ny fahavoazana
Ny olona manana famantarana fiterahana dia mety hahatsapa ihany koa ny fiovana lehibe amin'ny toe-pahasalany eo ambany fandaharam-potoanan'ny DNP. Ao ambanin'ny dosage ara-pahasalamana, ny tahan'ny metabolism dia mety hahatratra avo roa heny amin'ny ara-dalàna amin'ny marika na tsy misy poizina. Izany dia miteraka haingana ny fatran-tsakafo mavesatra ka miteraka ny atin'ny rongony.
Ankoatra ny fahaverezan'ny fatin-danja sy ny lanjany, ny DNP dia mifandray amin'ny tombontsoa hafa anisan'izany ny fihenan'ny vidiny T3. Izany indrindra raha toa ka miaina anaty androgenic anabolic cycle ianao. T3 no tompon'antoka amin'ny fihenan'ny voan'ny kanserika izay mety hitranga aorian'ny DNP. Amin'ny lafiny iray, ny DNP dia mety hampihenana ny haavon'ny T3 ho ambany na ambany ambany ny haavony tsara indrindra. Amin'ny tranga toy izany, dia mety hilaozanao ny doka kely amin'ny T3 ao anatin'ny tsingerinao
Ny DNP koa dia manome ny vatanao ho fikolokoloana anabolika izay manatsara ny fijerinao amin'ny endrika marefo sy anabolika. Mampitombo ny hery fanefitra koa ny zava-mahadomelina.
2,4-Dinitrophenol ny antsasaky ny fiainana
Rehefa mifehy zava-mahadomelina toy ny steroïde dia tena ilaina ny fampahalalana antsasak'adiny. Ny antsasaky ny zava-mahadomelina dia ny fe-potoana raisina ho an'ny vatana hanafoanana ny antsasaky ny zava-mahadomelina avy amin'ny rafitra. Ohatra, raha raisinao 100mg amin'ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny antsasak'adiny iray ora, dia midika izany fa ny rafinao dia hanana 50mg avy amin'ny zava-mahadomelina aorian'ny adiny iray. Ny medikaly dia haka ny ora 2 mba hialana tanteraka amin'ny rafitra.
Ny steroid DNP dia manana halavana lavabe maharitra maharitra hatramin'ny ora 36. Ny fiainan'ny DNP dia midika fa raha misy olona mandray ny dosie 100mg, dia mbola hihaona 50mg 36 ora aorian'ny dòz sy 25mg ora hafa ora hafa 36 ora. Ho an'ny famoahana tanteraka ny zava-mahadomelina dia mety handany ora 252 izany.
Ny fahalalana momba ny fampahalalana momba ny fiainan'ny DNP dia manampy anao amin'ny famoahana ny dosage. Izany dia satria mitaky fotoana lava miaraka amin'ny vatan'ny zava-mahadomelina. Vokatr'izany dia azo atao ny maka dipoavatra ambany amin'ny faran'ny lava. Ohatra, ny iray dia afaka mitondra tsiranoka 25 andro an'ny pilina fanafody fatin'ny DNP amin'ny doka 40mg isan'andro.
Zava-dehibe ny manamarika fa noho ny faharetan'ny fotoana lava be dia mitombo foana ny habetsahan'ny rongony ao amin'ny rà isaky ny mamoaka doka vaovao. Mety hahatratra tampoka tsy ampoizina ny fifantohana. Izany no antony mahatonga ny fahalalàna mikasika ny halavan'ny fiainana DNP izay zavatra manan-danja tokony ho fantatra alohan'ny handraisana ny famolavolana ny vatan'ny DNP. Manampy anao izy io mba handaminana ny dosage araka ny tokony ho izy mba hisorohana ny fifantohana tsy voafehin'ny DNP ao amin'ny vatana.
Raha mikasika ny dosage DNP, dia tokony hitandrina tsara ny olona iray ary araho tsara ny dosage nomeny. Izany dia noho ny mety hahafaty ny DNP amin'ny dosia tsy voafehy. Ny sasany amin'ireo fahafatesan'ny DNP dia nitatitra fa vokatry ny fifehezana ny zava-mahadomelina. Na dia tsy fantatra aza hoe inona ny doka marina mitarika ho amin'ny fahafatesana, dia nisy tombanana natao fa mety ho fatalin'ny dosage mihoatra ny 2500mg. Araka ny voalaza tetsy aloha, dia mety ho iray amin'ireo fomba azo antoka indrindra hanasarahana ny DNP ny dosage kely amin'ny cycles lava. Miaraka amin'ny DNP ny antsasaky ny androm-piainana, midika izany fa maka fotoana lava ny dokotera. Tsy tokony hieritreritra àry ianao fa afaka mitantana mihoatra noho ny doka voatondro. Ao amin'ny dosage DNP, zava-dehibe koa ny misoroka ny alikaola. Ny DNP dia mampiseho ny valiny amin'ny fomba samihafa miankina amin'ny olona iray. Tsy tokony hahatsapa ianao fa mahomby izany.
Miankina amin'ny fandeferana amin'ny zava-mahadomelina, ny olona dia mety manapa-kevitra ny haka dipooma ambany amin'ny faran'ny lava-pahazavana na dosie avo amin'ny fotoana fohy. Raha ohatra ka, ohatra, dia mety ho toy izao ny doka ambany misy tsingerina lava:
1 200mg isan'andro
2 200mg isan'andro
3 200mg isan'andro
4 200mg isan'andro
5 200mg isan'andro
6 200mg isan'andro
7 200mg isan'andro
8 200mg isan'andro
9 200mg isan'andro
10 200mg isan'andro
11 200mg isan'andro
12 200mg isan'andro
13 200mg isan'andro
14 200mg isan'andro
15 200mg isan'andro
16 200mg isan'andro
17 200mg isan'andro
18 200mg isan'andro
19 200mg isan'andro
20 200mg isan'andro
21 200mg isan'andro
Amin'io karazana dosage io dia tokony haka ny zava-mahadomelina ho an'ny ampahany roa isan'andro ianao. Izany hoe, 100mg amin'ny maraina sy 100mg amin'ny hariva. Tokony handefa ny tsingerina mandritra ny efatra ambinifolo andro (14) voalohany ianao mba hamaritana raha manana alahelo na vokatra mampidi-doza ianao. Ho an'ireo mpampiasa veteran, mety hitohy mandritra ny telo herinandro (21 andro).
Ho an'ny dingana fohy miaraka amin'ny dosage avo dia mety ho toy izao ny fiovan'ny toetrandro:
5 400mg isan'andro
6 400mg isan'andro
7 400mg isan'andro
8 400mg isan'andro
9 400mg isan'andro
10 400mg isan'andro
11 400mg isan'andro
Ny dosage ho an'ny dingana toy izany dia tokony atomboka amin'ny dingan'ny 200mg isan'andro (isaky ny 100mg amin'ny maraina sy 100mg amin'ny hariva), amin'ny andro voalohany. Na izany aza, ireo mpisera veterana dia mety manapa-kevitra ny tsy hampitombo ny dosage na ny isan'ny andro ao anatin'ilay tsingerina.
Raha mbola mijanona ho fanafody mahomby indrindra amin'ny fatiantoka mavesatra ny DNP, dia mifandray amin'ny vokatra hafa koa izy io. Ny voka-dratsin'ny voka-dratsin'ny DNP sasany dia mety hampidi-doza ary mety hiteraka risika lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona. Na dia izany aza, misy fomba azo antoka hitondra diloilo ho lany tamingana mba hampihenana ireo fiantraikany ireo. Ireto manaraka ireto ny sasany amin'ireo vokatra hafa mifandray amin'ny 2,4-dinitrophenol (DNP):
Ny mpampiasa rehetra ao amin'ny DNP dia mahatsapa famokarana hafanana be loatra ao amin'ny vatany. Ny fiakaran'ny hafanan'ny vatany dia ambony noho ny mahazatra manome ny mpampiasa tena tsy mampifaly.
Satria ny DNP dia miteraka ny famindrana ny ATP, ny vatana dia tsy misy hery. Izany dia mampitombo ny fahatsapana ny lethargy ary mahatsapa ho malemy ianao amin'ny fanatanterahana asa tsotra. Na dia betsaka aza ny fiantraikan'izany vokatra izany, dia miankina amin'ny habetsaky ny voka-dratsin'ny DNP izay raisinao ao amin'ny vatana, ny olona sasany dia mety handreraka be loatra amin'ny tebiteby. Izany dia satria mety tsy afaka mihinana mihitsy izy ireo. Amin'ity fotoana ity, tsy tokony hanohy ny doka ny olona iray. Ny lethargy dia mety hiaraka amin'ny olana hafa toy ny aretina.
Ny vokatry ny fitehirizana ny rano amin'ny DNP dia vokatry ny tsy fahampian'ny hafanana ao amin'ny vatana. Ny famokarana vokatra dia mitondra any amin'ny vasodilation izay miteraka ny fanitarana ny fantson-dra. Ny fanitarana ny fantson-dra dia mampitombo ny habetsahan'ny rà. Izany koa dia mahatonga ny fihazonana ny rano. Ny fanitarana ny fantson-dra koa dia mampihena ny tosidra. Ny vatana dia mitahiry kalesy bebe kokoa noho ny vokatra, izay miteraka fitehirizana bebe kokoa. Io rano io dia mahatonga ny hozatra. Amin'ny toe-javatra faratampony, dia mety hiteraka herisetra izy io satria ny diéretik dia tsy manolotra ny rano mangatsiaka. Mety hampiditra loza amin'ny fahafatesana izany.
Ny tsy fahampian-tsakafo dia iray amin'ireo fiantraikany ratsy amin'ny DNP. Ny olona eo ambanin'ny dosage DNP dia mahatsapa tsy fahampian'ny rano ao amin'ny vatana. Noho izany, ny mpisera dia voatery maka rano betsaka mandritra ny doka. Izany dia satria ny rano ambany ambany ao amin'ny vatana dia mety hiteraka voka-dratsy ho an'ny hafanana izay mety hitarika fahafatesana.
Ny isa tsara amin'ny mpampiasa DNP dia niaina ny fihinanan-kanina ho toy ny iray amin'ireo vokatry ny fatrana fanafody DNP. Izany dia mety ho vokatry ny zavatra maro, toy ny tsy fanjarian-tsakafo, ny pH ambany amin'ny ra, ary ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny antony hafa.
Famaritana ny elektrôlôte
Koa satria ny DNP dia mifandray amin'ny fahatsembana tafahoatra, betsaka ny rano sy salady dia very noho ny hatsembohana. Mety tsy ho feno fantsona rano ny rano marivo fa manolo ny rano fa tsy ny saline. Ny mpampiasa dia mety hampiasa ny jiro v8 ho fanafoanana izany.
Ny aretim-pivalanana dia mety ho vokatr'ireo salama very ao amin'ny vatana. Ny DNP tsy mitongilana dia miteraka tsy fahampian-tsakafo rehefa tonga any amin'ny tsinay lehibe. Izany koa no antony mahatonga ireo mpampiasa DNP ho tratran'ny aretim-pivalanana.
Na dia tsy fahita firy aza ireo tranganà herisetra, dia mbola hita any amin'ny olona sasany izy ireo. Ny olona sasany dia mety hahatsapa hafetsena any amin'ny faritra sasany amin'ny vatana toy ny manodidina ny torso. Ny lembalemba dia mety hiteraka fifandonana manodidina ny tarehiny, ny molotra amin'ny ampahany hafa. Ny olona mahazaka tsy fahampian-tsakafo dia afaka mividy fanafody antitra mahazatra mba hiadiana amin'ny vokatra. Ny ankamaroan'ny fanafody ara-pahasalamana DNP dia mety ho azo ekena raha tsy amin'ny toe-javatra faratampony izay tokony hampiato ny tsingerina.
Amin'ny tranga tena goavana, ny olona sasany eo ambanin'ny fanafody DNP dia mety hahita volo mavo rehefa mijery fotsy fotsy. Na izany aza, ity vokatra ity dia tsy misy fiantraikany hafa ary tsy mitohy intsony rehefa ajanonao ny DNP.
Ny voka-dratsin'ny DNP hafa dia mety ahitana ireto manaraka ireto:
Ny tsiron-tsakafo sy ny voka-tsoan'ny vatana rehefa avy nividy pills.
Azo antoka ve ny mitondra ny DNP
Na dia marihina fa tsy ara-dalàna ho an'ny fanjifànan'ny olombelona aza ny DNP, dia mbola io no zava-mahadomelina indrindra ho an'ny fahavoazana. Tsy misy zava-mahadomelina hafa azo ampitahaina aminy raha ny vokatr'izany. Na izany aza, raha tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy, io no mety ho zava-mahadomelina faran'izay mampidi-doza indrindra mety hitarika fahafatesana. Saika ny mpampiasa DNP rehetra dia mahatsapa ny halafon'ny famokarana hafanana ao amin'ny vatany. Izany dia miteraka mihoatra ny hatsembohana. Araka ny voalaza tetsy aloha, ity fanafody ity dia tsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny taova vatana toy ny atiny, ny voa.
Ho fampivoarana ny fiarovana sy ny fialan-tsasatrao amin'ny DNP na tsingerina dia ireto misy torohevitra vitsivitsy ahoana no fomba hisorohana ny voka-dratsin'ny DNP tokony hanaraka foana ianao:
Diet- Tsy tokony haka ny DNP ianao raha tsy misy ny vavony. Ny sasany amin'ireo sakafo voatsidika hampidirina ao amin'ny sakafo isaky ny ao amin'ny DNP dia anisan'izany ny yoghurt blueberry. Izany dia mihatra amin'ny antioxidant noho ny blueberries raha yoghourt manampy ny digestion. Ary koa, makà sakafo amin'ny fibresy avo.
Ambany dosages voalohany- Alamino hatrany ny tsingerinao amin'ny doka kely, ohatra, 200mg isan'andro amin'ny andro voalohan'ny tsingerinao. Na dia tsy mahatsiaro na inona na inona ianao, dia zava-dehibe ny manamarika fa ao amin'ny vatany izy satria efa ela ny DNP no hatomboka Ny efatra andro voalohany amin'ny dose ambany DNP dia ahafahanao mamantatra ny fandeferanao amin'ny zava-mahadomelina.
Ampidiro fanafody hafa ny fitondrana DNP. Ny fanampiana toy ny ECA dia mety hanampy amin'ny fihazonana hery goavana ary hampihena ny fahaverezan'ny fatotra. Mety ilaina ihany koa ny fampiasana antioxidants toy ny Alpha Lipoic Acid (fitantanana ny siramamy mena sy siramamy mena), ny voankazo voajanahary, ny voankazo, ny dite maitso, trimethylglycine ary vitamina C sy E.
Ataovy antoka fa mandray rano ampy ianao mandritra ny fotoan'ny DNP.Izany dia satria ny DNP no miteraka hetaheta amin'ny ankapobeny noho ny fahabetsany loatra.
Manolo-kevitra ny haka ny zava-mahadomelina mandritra ny ririnina mba hiadiana amin'ny fahatsembana tafahoatra.
Raha toa ianao ka manana traikefa mandritra ny DNP, dia miantohanao ny fihazakazakanao ny fiasan-tsasatra, indrindra raha toa ianao ka mandray dosie 400mg sy ambony.
Ataovy fikarohana foana ny mahafantatra ny fifandraisana misy eo amin'ny DNP sy ny zava-mahadomelina hafa. Hanampy anao hitantana ny tsingerinao izany raha sendra fanafody amin'ny zava-mahadomelina hafa ianao.
Satria tsy manan-kialofana amin'ny DNP ianao, dia tsy maintsy fantatrao ny fomba fitsaboana tsara ny zava-mahadomelina. Tsy tokony hihoatra ny fetran'ny dosage amin'ny 1gram koa ianao. Tena mety mahafaty izany fanafody izany. Tsy maintsy mandanjalanja ny tombontsoa azonao avy amin'ny zava-mahadomelina sy ny loza mety hitranga aminao.
Aiza no hividianana DNP
Rehefa mividy fanafody fitondrana fatin-jiro DNP izy io, zava-dehibe ny manamarika fa voamarina fa tsy ara-dalàna ny zava-mahadomelina any amin'ny firenena sasany. Na dia izany aza dia tsy ara-dalàna ny mivarotra ny zava-mahadomelina ho an'ny tanjona indostrialy ary dia amidin'ireo orinasa sasantsasany ao amin'ny DNP CAS (51-28-5).
Na dia mety voafetra amin'ny toerana sasany aza ny fisian'ny DNP, dia mora ny miditra amin'ny vata-masony DNP noho izy ireo hita ao amin'ny magazay an-tserasera. Misy tranonkala mivarotra ity vokatra ity ho an'ireo mpampiasa aterineto. Ohatra tena tsara amin'ireo tranonkala ahafahanao mahazo DNP ny vidin'ny vinaingitra azo vidiana AASraw.
Ny fahafahana miditra amin'ny serasera DNP online dia tena tsotra satria mila fotoana kely hahitana ireo tranonkala mivarotra zava-mahadomelina. Raha jerena ny hery sy ny loza ateraky ny fatiantoka DNP, dia mila mitandrina tsara rehefa mividy ity vokatra ity amin'ny aterineto. Izany dia noho ny fividianana vovo-tserasera DNP an-tserasera dia mety ho tafiditra amin'ny hosoka ary mety ho farany hividy ny DNP sandoka.
Ny mpampiasa dia tsy maintsy mahatakatra ihany koa ireo voambolana ampiasain'ireo mpivarotra rehefa mifampiraharaha amin'ny DNP. Ny tombony amin'ny fividianana vovobony DNP amin'ny aterineto dia ny manome ny mpampiasa azy amin'ny loharanom-pahalalana tena izy. Ny sasany amin'ireo mpivarotra an-tserasera dia hanome mpanjifa na fanadihadian'ny mpampiasa. Ireo hevitra ireo dia mety ho tena ilaina amin'ny fikarohana ataonao, satria hanampy anao izy ireo hahafantatra ny fahatsapan'ireo mpampiasa hafa momba ny vokatra na ny mpivarotra. Amin'izao karazana fampahalalana izao, dia ho takatrao ny zavatra niainan'ireo mpampiasa hafa an'ny vovobony DNP. Amin'ny fahaiza-misaina toy izany, afaka mandray fanapahan-kevitra tsara ianao raha te hividy ny vovony DNP amin'ny aterineto.
Ny DNP dia mijanona ho vokatra marefo indrindra ampiasaina amin'ny tanjaky ny fahaverezan'ny lanjan'ny olona samihafa, anisan'izany ny mpanao biriky. Na dia eo aza ny loza ateraky ny loza sy ny loza ateraky ny fiainana, ity vokatra ity dia manome vokatra mahagaga mahatalanjona. Ny vokatra dia manana fomba amam-panao tsara indrindra izay mahatonga ny fahavoan'ny fahavoazana. Ny DNP koa dia ampiasaina amin'ny tanjona hafa amin'ny klinika toy ny fitsaboana ny matavy sy ny diabeta.
Rehefa mikasa ny hampiasa ny pilina fanafody fatin'ny DNP, dia zava-dehibe ny; Tandremo ny tsipiriany momba ny zava-mahadomelina. Tafiditra ao anatin'izany ny dosage sy ny fotoana tokony hampiasana ny dosage DNP amin'ny fampiasana ny fahalalana momba ny fiainan'ny DNP. Ny tena zava-dehibe tokony hodinihina dia ny vokatra hafa mifandraika amin'ity zava-mahadomelina ity. Tokony handinika tsara ny sakafony mandritra ny dosage sy ny fanafody DNP hiadiana amin'ny vokatra hafa. Mahazo toro-hevitra avy amin'ireo manam-pahaizana foana ary miaraka amin'ny fampahalalana momba ny DNP, afaka miaro amin'ny DNP.
1. Bagchi Debasis, Preuss Harry G .; Fiterahana: Epidemiology, Pathophysiology, ary fisorohana (2007). P.200, p.201, p.212, p.561
2. Henn Debra, deeugenio Debora, Triggle DJ; Diet Pills (2005) p.42
3. Versaw Pam Grace; Ny vokatry ny 2,4-dinitrophenol amin'ny oncologer ao amin'ny Particle Subjectochondrial (1975) p.9, p.
4. Ledford (Jr.) Roy Merl; Ny vokatry ny 2, 4-dinitrophenol amin'ny Metabolism sy ny Function Frog Heart (1949) p.23, p.25, p.26.
6. Blachford Stacey, Krapp Kristine M .; Drugs and Substance Controlled: Information for Students (2003) p.130
7. Jameson J. Larry, De Groot Leslie J .; Endocrinology: Adult and Pediatric E-Book (2005) p. 1397